Umyalezo okhawulezileyo we-CDC wabantu baseMelika abagonyelweyo: I-Booster Shot
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Umyalezo okhawulezileyo we-CDC wabantu baseMelika abagonyelweyo: I-Booster Shot
Iindaba zeMpilo • LGBTQ • iindaba • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Izigidi ezili-14 zabantu eMelika abafumene isitofu sokugonya sikaJohnson noJohnson baziva belityelwe kwaye besemva. Namhlanje oku kunokuba kutshintshile ngesindululo esisalindelwe sokuxhonywa kwi-booster kuyo yonke iminyaka eli-18 ubudala.
CDC, i Isiko soLawulo lweZifo kunye nokuThinjwa eUnited States bakhuphe ngqo izikhokelo kubantu baseMelika kunye nomyalezo ongxamisekileyo wokufumana i-booster yesithathu kwiiveki ezintathu ezidlulileyo
Kubalulekile ukuqonda iidosi zokuqala nezesibini zokugonya i-COVID-19 ithatha indawo ephambili kuyo nayiphi na into oyifunayo
Namhlanje ipaneli yeengcali zangaphandle ngolwesiHlanu icebise uLawulo lokuTya kunye noLawulo lweziyobisi ukuba ligunyaze idosi yokunyanga isitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson coronavirus sabantu abaneminyaka eli-18 nangaphezulu.
ISebe lezeMpilo kwi-50 US-States lenza inguqulelo yolwazi ngemvelaphi kunye nengcebiso, lenza umba wonke ube nzima kwaye ngamanye amaxesha udide.
Ukugonywa kwe-Pfizer kunye neModerna yokuqala, i-COVID-19, inika ukhuseleko olugqwesileyo kwiimpawu ezinzima, ukulaliswa esibhedlele nasekufeni. Idosi yokuqala kunye neyesibini yokugonya kufuneka ithathe indawo yayo nayiphi na idosi yokukhuthaza. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokukhusela iintsapho kunye noluntu kukuqinisekisa ukuba abahlali abangagonywanga bagqibezela uthotho lwabo lokuqala lokugonya.
I-booster shot shot ye-Pfizer ngoku iyacetyiswa kumaqela aphambili athile ukwandisa impendulo yabo yomzimba kwi-COVID-19 kunye nokubonelela ngokhuseleko kwesi sifo, kubandakanya okwahlukileyo kweDelta.
Kutheni le nto kufuneka uthathele ingqalelo into yokukhuthaza?
Ukugonywa kwe-COVID-19 kuhlala sesona sixhobo sisebenzayo sokuthintela ukugula okunzima, ukungeniswa esibhedlele, kunye nokufa, kubandakanya nokhuselo kulwahlulo lweDelta olujikeleza ngokubanzi.
Nangona kunjalo, uphononongo olujongwe ngamaZiko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo lweZifo (CDC) abonisa ukuba emva kokugonywa ngokupheleleyo, ukukhuselwa kwintsholongwane ebangela ukuba i-COVID-19 iyancipha ngokuhamba kwexesha kwaye inike ukhuseleko oluncinci ngokuchasene nokwahluka kwe-Delta.
Ngubani omele afumane i-booster shot?
Abantu abathile basemngciphekweni wokosuleleka okanye abagula kakhulu ngenxa ye-COVID-19 ngenxa yeminyaka yabo, iimeko zonyango ezingaphantsi, okanye ngenxa yokuba behlala okanye besebenza kufutshane nabanye abababeka emngciphekweni wokuvezwa okanye wokudluliselwa.
I-CDC icebise ngamandla ukuba kunikwe abantu abadala abaneminyaka engama-65 nangaphezulu kwaye abo baneminyaka engama-50 ukuya kwengama-64 abaneemeko ezisisiseko zonyango kuba ukunqanda ukhuseleko kula maqela kubabeka emngciphekweni omkhulu wokugula kakhulu. Ke ngoko, iSebe lezeMpilo kumazwe amaninzi licebisa ukuba ababoneleli ngezempilo babeke phambili kula maqela.
Njengoko ukubonelelwa kwezikhuthazi kuvumela, i-CDC iya kwenza izindululo kumaqela ongezelelweyo, kubandakanya abantu abadala abaneminyaka eyi-18 ukuya kuma-49 abaneemeko zonyango ezingaphantsi kwezibonelelo kunye nomngcipheko kumntu ngamnye, kunye nabantu abadala abaneminyaka eyi-18 ukuya kuma-64 abasemngciphekweni omkhulu wokusebenza okanye iziko ukubonakaliswa, ngokusekwe kwizibonelelo kunye nomngcipheko kumntu ngamnye.
Njengokuba abahlali kuye kwafuneka balinde ngomonde ithuba labo xa izitofu ze-COVID-19 zaqala ukubakho kufuneka sonke sibonise aloha kwaye uqiniseke ukuba amaqela abekiweyo afunyanwa kuqala, yinxalenye yomyalelo onikwe abahlali kwi-State of Hawaii.
I-Pfizer booster yenzelwe kuphela abo bafumene isitofu sokugonya sePfizer; Akukhuthazwa abo bafumene ugonyo lweModerna okanye lweJohnson & Johnson.
Izitofu zokugonya zeModerna kunye neJohnson & Johnson ziphantsi koqwalaselo lweedosi zabo zokunyusa kwaye abo bagonywe esinye sezi zitofu kufuneka balinde de bobabini i-FDA kunye neCDC bakhuphe ingcebiso yabo. Isigaba sokuqala sale ngcebiso sele sigqityiwe kwaye silindele izaziso ezisemthethweni.
Ufanele ukuyifumana nini eyokukhuthaza?
Ixesha elinconywayo okwangoku le-Pfizer booster ziinyanga ezintandathu emva kokuba ugqibe amatyeli amabini okuqala. Idatha evela kuvavanyo lweklinikhi ibonise ukuba i-Pfizer-BioNTech booster shot, evunyiweyo ukuba isetyenziswe yi-Food and Drug Administration, ibonisa ukuba kukho ukwanda kwempendulo yomzimba phakathi kwabathathi-nxaxheba abaye bagqiba uthotho lwabo lokuthintela i-Pfizer iinyanga ezintandathu ngaphambili.
I-OVID-19 Shots booster shots ziyafumaneka kwaba balandelayo be-Pfizer-BioNTech abafumana isitofu abagqibe uthotho lwabo lokuqala okungenani kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye:
Ubudala be-18 + abasebenza kwi useto lomngcipheko ophezulu
Ubudala be-18 + abahlala kwi useto lomngcipheko ophezulu